Saika hanafika restaurant: nirefodrefotra ny poa-basy, jiolahy roa maty voatifitry ny polisy | NewsMada
Par Taratra sur 19/07/2019
Jiolahy roa indray lavon’ny balan’ny polisy tany Andrefantsena Ihosy, omaly raha nikasa hanafika ny bar restaurant Denis akaikin’ny Triangle Ihosy, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny kaomisarian’ny polisy ao Ihosy. Feno diam-bala ilay bar notafihin’ireo jiolahy…
Nifamaliana ny tifitra teo amin’ny polisy sy ny jiolahy nandritra ny fifampitifirana tao Ihosy, omaly maraina tamin’ny 10 ora. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny kaomisarian’Ihosy, nahazo loharanom-baovao mialoha izy ireo momba ny fisiana andian-jiolahy mikononkonona fanafihana mitam-piadiana ao amin’ity bar restaurant ao Andrefatsena ity. Niainga avy amin’io loharanom-baovao io no nahafahan’ny polisy tonga mialoha teo amin’ilay bar hotafihin’ireo jiolahy. Voalaza fa efa nihaodihaody teo amin’ny manodidina ilay bar ry zalahy mialoha ny fanafihana ary efa nanontanitany mombamomba ity bar hotafihina ity. Nampiahiahy ny olona teo amin’ny manodidina ny fihetsik’ireo jiolahy ka niantso polisy avy hatrany izy ireo. Mody nisotro labiera tao amin’ilay bar ry zalahy tamin’io fotoana io sady nanomana ny paikady rehetra hanatanterahana ny fanafihana. Efa teo am-pelatanan’ny polisy avokoa, araka izany, ny mombamomba ireto jiolahy ireto ka tonga nisambotra azy ireo hoentina hampidirina ao anaty fiara 4×4 ny polisy kanjo namoaka basy PA ny iray amin’ireo jiolahy ka nitifitra ireo polisy.
Jiolahy efa mpamerin-keloka…
Naratra nandritra ny fifanjevoana ny polisy iray sy ny tompon-trano. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa namonjy ilay namany naratra ireo polisy ka tamin’izany no nanararaotra naka ilay basy Kalachnikov an’ilay polisy naratra ilay jiolahy iray ka nitifitra avy hatrany. Namaly tifitra ireo polisy hafa ka maty tsy tra-drano rotiky ny bala, ilay jiolahy raha naratra mafy kosa ny namany iray ka nentina haingana teny amin’ny hopitaly, saingy tsy avotra intsony ny ainy noho ny ratra mafy nahazo azy. Nihorohoro ny teo amin’ny manodidina ilay bar, nandritra ny fifampitifirana. Nahitana diam-bala ny rindrin’ny trano. Nambaran’ny lehiben’ny kaomisarian’Ihosy hatrany fa jiolahy efa mpamerin-keloka ary efa nokarohina hatry ny ela ry zalahy ireto. Nanentana hatrany ny teo anivon’ny polisim-pirenena mba ho mailo sy hanome vaovao ireo mpitandro filaminana raha misy zavatra mampiahiahy.